Mandosira Coronavirus: Korea Utara Tourist Resort dia maniry mpitsidika sinoa
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Korea Avaratra » Mandosira Coronavirus: Korea Utara Tourist Resort dia maniry mpitsidika sinoa
Raha ny filazan'i Korea Avaratra dia mbola tsy nisy na dia iray aza ny tranga Coronavirus tao amin'ity firenena mitokana ity. Ity fanambarana ity dia niadian-kevitra ny manam-pahaizana ivelany maro. Ny valanaretina lehibe any Korea Avaratra dia mety hisy vokany mahatsiravina satria ny rafitry ny fahasalamany dia marefo hatrany. Ny areti-mandringana koa dia niteraka dona mafy tamin'ny toekarenan'ny Avaratra, miaraka amin'ny sazy UN sy ny loza voajanahary amin'ity fahavaratra ity
Ny fizahantany dia iray amin'ireo mahazo vola any Korea Avaratra. Nisy tompon'andraikitra ambony nitsidika toeram-pialantsasatra iray izay niara-nihazakazaka tamin'i Korea Atsimo mpifaninana nandritra ny fifampiraharahana taloha ary niresaka ny ezaka hanarenana azy io ho lasa "fialamboly ara-kolontsaina sotan'izao tontolo izao", hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny fanjakana tamin'ny Alahady.
Talohan'ny areti-mandringana, Korea Avaratra no nampiantrano mpizahatany Chinees tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra Korea Avaratra.
Naorin'i Korea atsimo, ny toeram-pialan-tsasatra Koreana Avaratra dia eo avaratry ny sisintany iraisan'ny Korea sy kilometatra an-jatony maro miala ny sisintany avaratra miaraka amin'i Sina. Ny rohy fitaterana any Korea Avaratra dia manasarotra ny fitondrana mpizahatany sinoa marobe any.
Misalasala ihany koa ny manam-pahaizana raha afaka manangana sy mamadika ilay faritra ho toerana fizahan-tany lehibe tsy misy fiaraha-miasa avy any Korea Atsimo.
Korea avaratra dia mety mametraka tsindry any Korea atsimo mba hahazoana tombontsoa amin'ny firosoana ara-toekarena satria mihombo ny aretin-toekarena Koreana Tavaratra.
Nandritra ny diany nankany amin'ny toeram-pivarotana Diamond Mountain, ny praiminisitra Kim Tok Hun dia "nanantitrantitra ny filàna fananganana ny faritra fizahan-tany araka ny fombantsika izay mampifangaro ny toetra amam-pirenena sy ny maoderina raha mifanaraka tsara amin'ny zava-boahary voajanahary," hoy ny tatitry ny Ivon-toerana Koreana Vaovao.
Nilaza i Kim fa mikendry ny hamadika ny faritra be tendrombohitra i Korea Avaratra ho "ilay iray malaza amin'ny fanompoana ny vahoaka sy fialantsasatra ara-kolontsaina fialonana an'izao tontolo izao." Izy sy ireo tompon'andraikitra hafa dia niresaka ny famolavolana sy ny fananganana "hotely maneran-tany, taranja golf, toerana fanaovana ski", hoy ny KCNA.
Korea avaratra dia niasa tamina fandaharam-pizahan-tany niaraka tamin'i Korea Atsimo nandritra ny 10 taona teo ho eo talohan'ny nampiatoana azy taorian'ny fahafatesan'ny mpizahatany Koreana Tatsimo tany tamin'ny 2008. Manodidina ny 2 tapitrisa ny mpizahatany Koreana Tatsimo nitsidika ny toeram-pialofana, loharanom-baovao tsy fahita firy vola vahiny ho an'ny Avaratra mahantra.
Rehefa nihatsara ny fifandraisana tao anatin'izay taona faramparany, dia nanosika ny Koreana roa hanangana indray ireo tetik'asa ara-toekarena nijanona toy ny fitsangatsanganana Diamond Mountain Saingy tsy nahavita izany i Seoul tamin'ny farany raha tsy nanohitra ny fanasaziana ny sazy avy amin'ny Firenena Mikambana napetraka tao amin'ny programa nokleary Avaratra.
Tamin'ny faran'ny taon-dasa, Korea Avaratra tezitra no nanosika ny fandravana ny trano fandraisam-bahiny Koreana Tatsimo sy ny fotodrafitrasa hafa tao amin'ilay toeram-pialofana ary nitaky Korea Selatan handefa mpiasa ho any amin'ilay tranokala hanafoana ireo trano. Nantsoin'ny mpitarika Koreana Tavaratra Kim Jong Un ireo fotodrafitrasa Koreana Tatsimo ho “maloka” sy “endrika tsy mahafinaritra”.
Saingy tamin'ny volana Janoary, nanemotra ny drafitry ny fandravana i Korea Avaratra noho ny ahiahiny amin'ny fiparitahan'ny virus coronavirus ..
Leif-Eric Easley, mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Ewha any Seoul, dia nilaza fa ny fotoanan'ny fanambarana Koreana Avaratra dia tsy momba ny fizahan-tany fotsiny fa ny tsindry politika. "Amin'ny alàlan'ny fihazonana ny fanantenan'i Seoul ho tandindomin-doza," dia nanery an'i Korea Avaratra i Korea Avaratra "mba hitady fomba hamerenana ny tombony ara-bola ho an'ny Avaratra," hoy izy